Virus အားမြင်အောင်ကြည့်ခြင်း ~ မျိုးကို
06:14 How To, Technique, Virus No comments
ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတာ Virus ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပါတကယ့် Virus Program ကို မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး Virus ကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ရင် Anti – Virus Software တောင် မလိုပဲ Virus ကို Delete လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် စိတ်ချရအောင် Anti – Virus Program တစ်ခုတော့တင်ထားရပါမယ် အရင်ဆုံး လုပ်ရမှာက ….***Autorun *** ပိတ်ထားဖို့့ပါ .. အလွန်အရေးကြီးပါတယ်
1.Autorun ပိတ်နည်းကို ဒီနေရာ ကနေ ၀င်ဖတ်ပါ။
2.Autorun ပိတ်ပြီးရင် Start ကနေ all Program ကနေ My Computer ကို ဖွင့်ပါ
3.အပေါ်ဘားတန်း Tools အောက်က Folder Options ကို နှိပ်ပါ...။
4.View ကိုနိုပ်ပြီး Show Hidden files and folder ကို Click ခြင်းဖြင့် Hidden file တွေကို မြင်ရအောင်လုပ်ပါ
5.ပြီးရင် Hide Protected operation system file ရှေ့ က အမှန်လေးကို ဖြုတ်ပါ Virus က system file အမျိုးအစားဖြစ်လို့ ပါ။
6. ပြီးရင် Hide extensions for known file types ကို အမှန်ဖြုတ်ပါ။
7. ပြီးရင် Use Simple File sharing ကို အမှန်ဖြုတ်ပါ။
8.ပြီးရင် OK ကို နှိပ်ပါ...။
9.ပြီးရင် သင့််ရဲ့ Stick , Mp3 , Mp4 ,Camera တစ်ခုခု ထိုးလိုက် ပါသင့် Stick မှာ Virus ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည် ဖြစ်စေ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ လုပ်ပါ …။
*****Stick ကို Double Click နဲ့ လုံးဝ မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့ …*****
ပုံမှာပြထားသလို အပေါ်ဘားတန်းက Folder ဆိုတာလေးကို Click ပါ
10. ပုံမှာပြထားသလို ဘေးဘက်က နေ သင့်ရဲ့Removable Disk ကိုရွေးလိုက်ပါ..။ ဒါဆိုညာဘက်မှာ Removal Disk ထဲက File တွေ ကို မြင်ရပါပြီ …မှိန်နေတဲ့ File တွေ ၊ Folder တွေ မရှိဘူး ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Stick မှာ Virus မရှိပါဘူး ..Virus မရှိခဲ့ ရင်…
My Computer ► Tools ► Folder Options မှာ View ကို Click ပြီး Restore Defaults ဆိုတဲ့ Button လေးကို click ပါ
Hidden file နဲ့ system file တွေကို ပြန်ဖျောက်လိုက်တာပါ ဒီလို မဖျောက်ခဲ့ ရင် Hard disk C: ထဲက မှိန်နေတဲ့ System File တွေ မှားဖျက်မိရင် Window ပြန်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး…
ကဲတကယ်လို့မှိန်နေတဲ့ File တွေ Stick ထဲ မှာ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ .. အဲဒီ Stick ထဲက
****ဘယ်ဖိုင်တွေ ၊ဖိုဒါတွေ ကို မှ သွားမဖွင့်ပါနဲ့ *****
မှိန်နေတဲ့ File တွေ ဟာ Virus ပါပဲ Stick ထဲ က မှိန်နေတဲ့File နော် သင့်Computer ထဲ က မှိန်နေတဲ့File တွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...။
***Folder မဟုတ်ဘူးနော်..File ပါ..***
.exe , .vbs , ….reg , ….com အစရှိသဖြင်. ဆုံးနေတတ်ပါတယ် အဲဒီလို မှိန်နေတဲ့ File တွေ ၊Folder တွေ ရှိပြီ ဆိုရင် Autorun.inf ဆိုတဲ့ File လေးရှိနေပါလိမ့်မယ် ..။အဲဒါဆိုရင်တော့ ကြိမ်းသေ Stick ထဲမှာ Virus ရှိနေပါပြီ…မှိန်နေတဲ့ Folder တွေ ရှိနေမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီ Folder ဟာ စာဖတ်သူရဲ့data တွေ ပါနေတဲ့..။
****Folder အစစ်တွေ ပါ ..သွားမဖျက်ပါနဲ့…****
မှိန်နေတဲ့Folder တွေရှိပြီ ဆိုရင် တော့ အဲဒီ Folder နာမည် နဲ့ တူ တဲ့ Virus Folder ရှိနေပါလိမ့်မယ် Virus Folder ဟာ .exe နဲ့ ဆုံးနေပါလိမ့်မယ် Folder အစစ်ဟာ နောက်မှ ဘာ extension မှ မရှိရပါဘူး ….ဥပမာ
သင့် Folder အစစ် ► Picture2( Virus က မမြင်ရအောင်လုပ်ထားသဖြင့် မှိန်နေပါလိမ့် မယ် ) Virus Folder ► Picture2.exe ( ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပါလိမ့်မယ်
ဒါမှသာ သင့် Folder အမှတ်နဲ့Virus ကို Click မိမှာလေ.. Click မိတာနဲ့ Virus ၀င်သွားပါလိမ့်မယ့် )
Virus Folder ကို ရွေးပြီး ဖျက်နိုင်ပါပြီ ….ဖျက်တဲ့ အခါမှာ သတိထားပြီး ဖျက်ပါ ..Double click လုံးဝမနိုပ်မိပါစေနဲ့ ..ဖျက်ချင်တဲ့ File ကို Left Click တချက်ထဲသာနိုပ် Select ပေးပြီး Shift + Delete တွဲ နိုပ်ခြင်းဖြင့် ဖျက်နိုင်ပါတယ် ….(သို့ မဟုတ်) ဖျက်ချင်တဲ့ File ပေါ် Right Click နိုပ်ပြီး Delete ကို ရွေးပြီးလဲ ဖျက်နိုင်ပါတယ် …အမှိုက်ပုံးထဲကိုပါ Clean လုပ်ပေးရမှာပါ ...။
…စာဖတ်သူရဲ့Stick ထဲက File တွေ ကို ကိုယ် အသိဆုံးပါ ကိုယ့် File လဲ မဟုတ်ဘူး မှိန်လဲမှိန်နေတယ် ဆိုရင်တော့ အကုန်သာ ဖျက်ပစ် …မှိန်နေတဲ့ Folder တွေ ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ Folder ထဲကို Double Click နဲ့ ဝင်ပြီး အထဲက File တွေ ကို Copy ကူးယူပြီး စက်ထဲမှာ ပြန်သိမ်းထားလိုက်ပေါ့ ဒါက နောက်ဆုံးမှလုပ်ပါဖျက်သင့်တဲ့ Virus တွေ အရင်သတ်ပါ Folder က ထင်ရှားနေတယ် နောက်မှာ .exe နဲ့ ဆုံးတယ်ဆိုရင်တော့
သွားမနိုပ်ပါနဲ့ Virus စစ်စစ်ကြီးပါ …မသနားနဲ့ …ဖျက်သာပစ်ဗျာ …..ဥပမာ (MyFolder.exe)
ကဲ အားလုံးပြီး သွားရင်တော့ System File တွေ ကို ပြန်ပြီးမမြင် ရအောင်ဖျောက် ပစ်ရပါတော့မယ်
မဟုတ်ရင် C: ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ မှိန်နေတဲ့ file တစ်ခုခုကို မှားဖျက်မိရင်တော့တင်ပေတော့ Windows ပဲ …My Computer ► Tools ► Folder Options မှာ View ကို Click ပြီး Restore Defaults ဆိုတဲ့Button လေးကို click ပါ Hidden file နဲ့ှsystem file တွေကို
ပြီးရင်တော့ Virus ကင်းရှင်းစွာနဲ့ စိတ်ကြိုက်သုံနိုင်ပါပြီ..
Avira Av-ti Virus Program လေးကို တော့ တင်ထားသင့်ပါ တယ်သူ သတ်လို့ကျန်ခဲ့ တဲ့ File တွေကို မှ ကိုယ်တိုင် ဖျက်ပစ်ပေါ့..
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ဒီနည်းတွေ ဟာ သင့် Computer မှာ Virus ကင်းစင်မှ သုံးလို့ ရမှာပါ ….
Virus ၀င်နေလို့ ကတော့Folder Options တောင်တွေ့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး …
ဒီနည်းကို ကျွမ်းကျင်လာရင် Anti Virus software တောင် မလိုပဲ Virus သတ်နိုင်ကြောင်းပါ ..Virus File တွေဟာ Right ►Properties ကိုနိုပ်ကြည့်ရင် Hidden နေရာမှာ အလုပ် လုပ်လို့ မရအောင်မှိန်နေတတ်ပါတယ် …..